२०७७ असार ६ शनिबार १०:१८:००
भारतीय सहरमा हराएका छोरालाई गोमाको सन्देश- श्रीराम तँ जहाँ भए पनि झट्टै आइज
‘छोरा हराएको २५ वर्ष भयो । चिठी पनि आउँदैन । मान्छे पनि आउँदैन । खै काँ गो काँ गो ।’ ७६ वर्षीया गोमादेवी सापकोटाले सुस्तरी सुनाइन् । त्यसपछि तौल नाप्ने मेसिन कपडाले पुछिन् । बटुकामा राखेको पाँच र दशका नोट हेरिन्, अनि सुनसान सडकको पश्चिमतिर नियालिन् ।
दैनिक ३-४ सय कमाउने गोमादेवीको कमाइले केही दिन त धानियो । तर, लकडाउन ६०औँ दिन नाघेपछि जोहो गरेको खानेकुरा रित्तियो । त्यसपछि गोमा सरकारको आदेश अवज्ञा गर्न बाध्य भइन् । दक्षिणढोकाको अँध्यारो कोठाबाट तौल नाप्ने मेसिन बोकेर निस्किइन्, सडकमा ।
गोमादेवीको कथा सुरु हुन्छ, सिपाघाटपारि सिन्धुपाल्चोकबाट । काभ्रे मण्डनदेउपुरमा उनको मामाघर । १३ वर्षको उमेरमा बिहे गरेर काभ्रे पाँचखाल आइन् । २ सन्तान जन्म दिइन्, दुइटैले बाल्यकाल काट्न पाएनन् । जाँड-रक्सीको कुलतमा डुबेका श्रीमान्ले तेस्रो सन्तान जन्मिएको केहीदिनमै अर्की बिहे गरे । घरबारी बेचे । गोमा भन्छिन्, ‘अर्की बिहे गरेपछि मलाई कुटेर घरबाट निकाले ।’ ०३५ साल माघ अन्तिम साता घरबाट निकालिँदा गोमा १५ दिनकी सुत्केरी थिइन् । शिशु श्रीराम च्यापेर गोमा पशुपति मन्दिरमा शरण लिन पुगिन् ।
‘मेरो फोटो टाँसेर एउटा समाचार लेखिदिनु न बाबु । छोराले थाहा पाएर आमा खोज्दै आउँछ कि !’
भोलिपल्टदेखि गोमाको नयाँ दिनचर्या सुरु भयो । दिनभरि पशुपति मन्दिरवरपर माग्नु, बेलुकी त्यही पाटीमा आएर रात काट्नु उनको दिनचर्या हुन थाल्यो । भष्मेश्वर, श्लेषमान्तक वन, मृगस्थली, गुह्येश्वरी, आर्यघाट, कैलाशडाँडा उनको मागिहिँड्ने जक्सन बन्यो । बच्चालाई दूध नपुगेर कैयन् रात आमा-छोरा सँगै रोएको क्षण गोमाको आँखामा ताजै छ । झरीमा रुझ्दै र पुसको ठिहीमा लुगलुग काम्दै भिख मागेको तीतो समय पनि उनको स्मृतिमा जिउँदै छ । भन्छिन्, ‘बालखा बच्चा छाडेर अरू काम गर्न सकिनँ ।’
मन्दिरवरपर माग्दामाग्दै गोमाले ७ वर्ष बिताए । पशुपति मन्दिरपरिसरकै राम मन्दिर विद्यालयमा भर्ना भए, श्रीराम । गोमा अरूको घर-खेतमा काम गर्न जान थालिन् । गोमाले पनि ‘बाह्रखरी’ किनेर ल्याइन् अनि एबिसिडी र वानटु पढ्न थालिन् ।
एकपटक जोखेको १ रुपैयाँ लिन्थिन् गोमा । अब गोमाको दैनिकी परिवर्तन भयो । केही पैसा पनि जोहो गरिन् । पशुपतिछेउमा डेरा लिएर बस्न थालिन् । ६ महिनादेखि डेरामा नआएको श्रीराम एकरात हुरीजस्तै बत्तिएर आइपुगे । त्यसरात आमाछोरा धेरैबेर घरसल्लाह गरिरहे । श्रीरामले होटेलमा भाँडा माझ्ने काम गरिरहेको र अब त्यो काम छाड्ने आमालाई सुनाए । भोलिपल्ट बिहानै श्रीरामले आमालाई भने, ‘आमा ! रत्नपार्कमा जोखेको २ रुपैयाँ लिन पाइन्छ रे । म त उतै लागेँ ।’
गोमा एकछिन अकमक्क भइन् । केही बोलिनन् । त्यसपछि जानुपर्दैन भनिन् । तर, उनको आग्रहले श्रीराम रोकिनेवाला थिएनन् । बिहान छोरालाई बिदा गर्न गोमा बाध्य भइन् । भन्छिन्, ‘नगरपालिकाले मिसिन लगेको रनाहामा ऊ गएको हो । अझै फर्केन । काँ गो, काँ गो ?’
बोल्दाबोल्दै गोमाको गला अवरुद्ध भयो । बोलिनन् । पछ्यौरीको टुप्पाले आँसु पुछिन् । भनिन्, ‘दुःखले हुर्काएको छोरा हो । एकदिन पक्कै फर्किन्छ भन्ने आशा छ ।’ मेसिन पुछिन् । अनि फेरि भनिन्, ‘अझै उस्तै रित्तै दौडिहिँडेको छ कि । परिवारले पो बाँधिएको छ कि ! खै के भो के भो !’
सडकमा बस्दाबस्दै एकजनाले गोमालाई सुझाए-ज्योतिषीलाई हात देखाऊ, उसले तिम्रो छोरा फकाइदिन सक्छ ।’ त्यसपछि गोमा हात हेराउने ज्योतिषी खोज्दै गइन् । ज्योतिषीले भने, ‘तिम्रो छोरा दक्षिण दिशातिर जिउँदै छ ।’ खुसी हुँदै गोमाले आग्रह गरिन्, ‘छोरालाई फर्काइदिनुप-यो हजुर ।’ ज्योतिषीले भने, ‘छोराले लगाउने कपडाको टुक्रा र फोटो ल्याउनुस् ।’
गोमासँग छोराको चिनो भन्नु नै सम्झना र माया मात्र थियो । नदेखिने चिनो ज्योतिषीलाई काम लागेन । त्यसपछि उनी निराश भएर फर्किइन् । भन्छिन्, ‘सबै ज्योतिषीले छोराको फोटो र लुगाको टुक्रा माग्छन्, कहाँबाट ल्याउनु ! त्यसपछि जानै छाडेँ ।’
मनमनै सोचिन्- जुन श्रीमान्ले घर निकाला गरी चार–चारवटा बिहे गर्दै हिँड्यो अब त्यही श्रीमान्को नागरिकता चाहिने ? गोमा केही बोल्न सकिनन् । सरकारी मान्छेलाई झम्टिन पनि उनको हिम्मत पुगेन । गोमालाई लाइनबाट हटाइयो । त्यसपछि ल्याम्पोस्टमुनि बसेर रोइरहिन् । भन्छिन्, ‘के-के जाती मागेर बेकारमा धरधरी रुवाइदियो । त्यसपछि राहत थाप्न कतै गइनँ ।’ नागरिकता नभएकै कारण गोमाले वृद्धाभत्तासमेत पाएकी छैनन् ।
आफ्नै जीवनकथा र छोराको सम्झना सुनाउँदासुनाउँदै टुसाल चोकमा केही बटुवा देखिए । उनीहरूले तौल नापेर गए । सडकतिर फेरि एकोहोरो हेर्न थालिन् । केही सम्झिएजस्तो गर्दै भनिन्, ‘चिठीभन्दा समाचार लेख्यो भने सबैले पढ्छ रे, सबैतिर पुग्छ रे । मेरो फोटो टाँसेर एउटा समाचार लेखिदिनु न बाबु । छोराले थाहा पाएर आमा खोज्दै आउँछ कि !’ सोधेँ, ‘के भनेर लेखिदिउँ त आमा ?’ पछ्यौरीले आँसु पुछिन् । केही बोलिनन् । एकछिनपछि भनिन्, ‘श्रीराम तँ जहाँ भए पनि झट्टै आइज । तेरो आमा टुसाल चोकको सडकछेउमा रोएर बसिराछ भनेर लेखिदिनू ।’